Maxaad ka taqaan Milkiilihii geeriyooday ee kooxda Leicester City - Vichai Srivaddhanaprabha..? [Akhriso] | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Maxaad ka taqaan Milkiilihii geeriyooday ee kooxda Leicester City – Vichai Srivaddhanaprabha..? [Akhriso]
Waxaa si rasmi ah loo xaqiijiyey inuu geeriyooday Mulkiilihii kooxda Leicester City, kadib markii diyaarad gaara oo helikobtar ah oo siday ay ku burburtay garoonka kubadda kacagta kooxdaasi ee Kin Power bannaankiisa.
Ninkan oo kasoo jeeda dalka Thailand laguna magacaabi jiray Vichai Srivaddhanaprabha, ayaa waxaa la socday labo ka mida shaqaalihiisa, Duuliyihii iyo qof wehelinaya, waxayna dhammaantood ku geeriyoodeen diyaaradda burburtay isla markii ay ka kacday Garoonka Sabtidii.
Dada badan ayaa tacsi u tegay Garoonka King Power oo halkaasi dhigay kumanaan oo ubaxyo baroordiiq ah, waxaana dadka shilka ku dhintay lagu sheegay inay kala yihiin: Mulkiilihii kooxda Leicester Vichai Srivaddhanaprabha, Labo ka mid ah shaqaalihiisa oo kala ah Nursara Suknamai iyo Kaveporn Punpare, Duuliye Eric Swaffer, iyo Izabela Roza Lechowicz oo ahaa duuliye kale.
Milkiilihii kooxda Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha wuxuu ahaa ganacsade iskiis u sameeyay hantida uu leeyahay, isagoo meel hoose kasoo bilaabay ganacsiga, waana abbe dhalay afar carruur, wuxuuna asaasay King Power International.
Waxaa la sheegay inuu kaalinta shanaad uga jiray liiska maalqabeennada dalka Thailand oo uu kasoo jeedo. Wuxuu Kooxda Leicester City iibsaday sanadkii 2010-kii, isgoo ku iibsaday 39 milyan oo Geni, waxayna markii ugu horeysay sanadkii 2016 si la yaab leh ku qaaday koobka Horyaalka Ingiriiska ee Premier League.
Previous articleXildhibaanada kasoo jeeda K/Galbeed oo Digniin Culus & Hanjabaad u jeediyey Madaxweyne Farmaajo [Daawo]
Next articleDagaal beelleed ka dhacay degmada Wanlaweyn iyo barakac ka socda Magaaladaasi